ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြင်နာအိပ်မက်... | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြင်နာအိပ်မက်...
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 8:49 AM
Posted by မိုးသက် at 8:49 AM Read more
စံပယ်ချို June 26, 2012 at 12:27 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! June 27, 2012 at 12:00 PM
ရုပ်ချောသလို သီချင်းဆိုလည်း ကောင်းတာပဲ...:):)
Sweety Snow June 27, 2012 at 11:05 PM
ချော (အစိမ်းရောင်လင်ပြင်) June 29, 2012 at 12:42 AM
Facebook မှာတင်ထားတာတွေ့လို့ နားထောင်လိုက်တယ်။
စာအရေးကောင်းသလို သီချင်းလည်း အဆိုကောင်းတာဘဲ..
မေမြို့ရောက်ရင် ထမင်းသွားစားဦးမှ :P
Innnn you sing very well but your sister is better than you. Am I right? ^__^ Love your voice and song. Keep it up :)